Gini bu oge solstice? | Netwọk Mgbasa Ozi
Planetwa anyị, dị ka ndị ọzọ niile, na-agbagharị n'onwe ya ma na-agbakwa kpakpando ya, nke a bụ Sun. Mgbe ọ bụla oge awa na-agbanwe agbanwe, ha na-ebelata ma ọ bụ na-abawanye, dabere na ọdịdị dị elu nke eze kpakpando.
Kwupụta na izu ụka nke June, n'etiti 20 na 21, oge okpomọkụ na-apụta na Northern Hemisphere. Na ọkara nke ụwa ọzọ, na Southern Hemisphere, ihe omume a mere n'etiti Disemba 20 na 21. Ma, Kedu ihe ọ bụ na gịnị kpatara ya ji dị mkpa?
1 Gịnị bụ nkọwa nke solstice?
1.1 Kedu ihe bụ oge anwụ solstice?
1.2 Gini mere oge ezumike anaghị agwu oge kacha ekpo ọkụ?
2 Ọchịchọ ịmata banyere ụbọchị kachasị ogologo nke afọ
2.1 Kedu ihe bụ Fiesta de San Juan?
3 Kedu mgbe bụ oge anwụ solstice na 2017?
Gịnị bụ nkọwa nke solstice?
A maara ya dị ka solstice oge nke afọ mgbe Sun na-aga site na otu n'ime ebe kachasị anya na ecliptic site na ikuku. N'ime ime nke a, a na-enye ọdịiche kachasị na oge dị n'etiti ehihie na abalị. Yabụ, n'oge anwụ solstice ụbọchị kachasị ogologo, ebe oge oyi kachasị dị mkpụmkpụ.
Iji ghọta ya nke ọma, anyị ga-amalite site na ịkọwa ihe ecliptic bụ. Nakwa. Dị ka anyị si mara, anyanwụ bụ kpakpando nke na-edozi na mbara igwe mgbe niile; Agbanyeghị, site n'ọnọdụ anyị ebe a n'uwa ọ dị ka ọ na-agagharị. Nke a n'echiche ụzọ Sun 'njem' a maara dị ka ecliptic., nke bụ ahịrị na-agafe ụwa niile n’afọ. Ejiri eriri a gbagọrọ agbagọ site na nkwụsị nke ụgbọ elu nke ụwa na mbara igwe.
Mgbe Anyanwụ rutere elu dị elu karịa Tropic nke Ọrịa Cancer, oge ọkọchị na-amalite na Northern Hemisphere; N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ọ gafere na Tropic of Capricorn, mgbe ahụ ọ ga-adị na Southern Hemisphere ebe ụbọchị ga-akachasị ogologo. Kedu mgbe oge anwụ na-akwụsị? Na Northern Hemisphere ọ bụ June 20 ma ọ bụ 21, ebe ndịda ọ bụ Disemba 20 ma ọ bụ 21.
Gini mere oge ezumike anaghị agwu oge kacha ekpo ọkụ?
Nke a na-akọwa ihe kpatara na agbanyeghị na ụwa juputara na 71% mmiri ọ gaghị anọ ruo etiti oge ọkọchị na a ga-enwe ụbọchị ọkụ karịsịa.
Ọchịchọ ịmata banyere ụbọchị kachasị ogologo nke afọ
Ọtụtụ ndị na-echere ụbọchị a. Ọ bụ ụbọchị mgbe ịchọrọ ịpụ gaa zute ndị enyi iji mee ememme na oge okpomọkụ emesịa laghachi na n'oge na-adịghị anya anyị ga-enwe oge n'efu na anyị nwere ike iji ohere nke iwepu ma rara onwe anyị nye ihe kachasị amasị anyị. Ma, Imaara ka esi eme ya?
A na-eme ememe solstice ogologo oge, ọbụnadị tupu ụmụ mmadụ amalite iwu ụlọ dị ka anyị si mara ha taa. Ọ bụ ụbọchị ebe ike na anwansi bụ ezigbo ndị dike, nke ga-eme ka ha dị ọcha mgbe ha na-ekele Anyanwụ maka ihe ọkụkụ, mkpụrụ osisi na awa ndị na-amụbawanye nke ìhè.
Na Egypt oge ochie, dịka ọmụmaatụ, ịrị elu nke kpakpando Sirius dabara na oge ezumike nke oge anwụ na idei mmiri kwa afọ nke na-eme ka ọ ghara ịga n'ihu: Naịl. Nye ha ọ bụ mmalite nke afọ ọhụrụ, n'ihi na ọ bụ naanị mgbe osimiri tolitere ka ha nwere ike ịkọ nri ha.
Kedu ihe bụ Fiesta de San Juan?
Nke a bụ otu n’ime ememme kacha ochie n’ụwa. Chọta kpọmkwem mbido na-efu n'oge. Ternyaahụ ekwere na Anyanwu huru uwa n'anya ọ bụkwa ya mere na ọ chọghị ịhapụ ya. N'ihi nke a, ụmụ mmadụ chere na ha ga-enye eze anyanwụ ume June 23, na maka nke ahụ kedu ihe dị mma karịa ọkụ ọkụ.
Mana ọzọkwa, ekwere na ọ bụ oge kacha mma ịchụpụ mmụọ ọjọọ ma dọta ndị dị mma. N'agbanyeghị nke ahụ, na ọbịbịa nke Iso Christianityzọ Kraịst puku afọ abụọ gara aga, ememe a funahụrụ ya. Dika akwukwo nso, Zacarías nyere iwu ka ha tinye oku oku iji gwa ndi ikwu ya banyere omumu nwa ya nwoke Juan Bautista, nke dabara n'abali nke oge ezumike. Iji cheta ụbọchị ahụ, Ndị Kraịst nọ na mgbe ochie gbara nnukwu ọkụ ọkụ ma mee ọtụtụ emume gburugburu ya.
Ugbu a ọ na-eji ụbọchị ahụ ahụ ndị enyi n'ụsọ osimiri, gburugburu ọkụ ma nwee ọ theụ; ọ bụ ezie na a ka nwere ụfọdụ emume ka fọdụrụ, dị ka ịwụli mmiri na ebili mmiri, ịgafe ọkụ ma ọ bụ ịsa ahụ ka ọdịmma ọchị mụmụọrọ anyị.
Kedu mgbe bụ oge anwụ solstice na 2017?
Ihe kwere nkwa ịbụ otu n’ime ụbọchị pụrụ iche nke afọ 2017, ga-abụ Wenezdee, June 21 na 06:24, nke ahụ bụ, ọ ga-adaba na ụbọchị gọọmentị na mmalite nke oge ọkọchị.
Ma gị, ị maara ka ị ga-esi mee ememme okpomọkụ solstice?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Kedu ihe bụ oge anwụ solstice?
A kagbuola ọmụmụ ndị Canada na mgbanwe ihu igwe n'ihi mgbanwe ihu igwe